> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Camera Canon EOS 7D Digital
Ma suurto gal inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka Canon EOS 7D?
Hi oo dhan, si qalad ah oo aan ku dhawaad ​​400 oo sawiro ka soo kaadhka xusuusta on my camera digital. Sawirada kuwa loo qaaday intii aan arooska. Hadda waxaan u baahan tahay qof ii sheeg sida aan dib ka heli kartaa sawiro aan la tirtiro. Waxaan la isticmaalayo ah Canon EOS 7D. Fadlan ha i caawi Thanks.
Dhab ahaantii, ee photos tirtiray aan gebi ahaanba laga saaray camera aad. Waxay baabi'i doontaa si joogto ah oo keliya marka ay overwritten by xog cusub. Taas macnaheedu waa in aad sida macquulka ah soo kaban karto, sawiro ka soo Canon EOS 7D la codsi soo kabashada sawir. Marka soo food saartay arrintan, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay joojiyaan qaadashada Canon EOS 7D ama kaadhka xusuusta ay si loogu isticmaalo wax kasta.
Waxaad doorashooyin badan haddii aad ka raadin si taxadar leh ee Internetka. Wondershare Photo Recovery ama Wondershare Photo Recovery for Mac waa mid ka mid ah mid ka mid ah ugu kuwa talosaaran iyaga ka mid ah. Qalabkani waxa uu awood badan u keeneysaa inuu ka soo kabsado sawiro laga badiyay cayn kasta oo xaaladood, sida tirtirka, formatting camera, ama xataa musuqmaasuqa. Ka sokow, waxaad had iyo jeer u yeelan doontaa in ay dib u soo ceshano videos iyo files audio ka camera Canon EOS 7D la barnaamijkan aad. Waa si awood leh oo si sahlan loo isticmaalo in sawiro laga badiyay ka Canon EOS 7D loo soo celiyo oo aan xanuun doonaa.
Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah Wondershare Photo Recovery ay u bilaabaan soo kabashada sawir Canon EOS 7D hadda!
Kabsado Photos ka Canon EOS 7D in 3 Talaabooyinka
Fiiro gaar ah: Waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad Canon EOS 7D ama kaadhka xusuusta ay la your computer inuu ka soo kabsado photos lumay. Haddaba aan ka bilowno kabashada la version Windows ee Wondershare Photo Recovery.
Tallaabada 1 Ku rakib oo ay maamulaan Wondershare Photo Recovery on your computer. Waxaad ka arki kartaa dhammaan qalabka ay taageerayaan in suuqa kala bilowga ay.
Waxaad u baahan tahay oo kaliya in guji "Start" si ay u bilaabaan dib u soo kabashada sawir Canon EOS 7D.
Tallaabada 2 Hadda waxaad dooran kartaa drive aad Canon EOS 7D ama kaadhka xusuusta ay u furmo. Ka dibna riix "Scan" si aynu barnaamijka iskaan photos lumay ka.
Tallaabada 3 Markii iskaanka ka baxayo, waxaad yeelan doontaa in ay Falanqeynta helay images doorataa "Photo" column ee bidix ee daaqadda.
Markaas waxaad kartaa sawirro aad ku socoto inuu ka soo kabsado aad camera Canon EOS 7D oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: Sawirrada soo kabsaday laguma hayn karo in aad camera Canon EOS 7D ama kaadhka xusuusta inta lagu guda jiro dib u soo kabashada, haddii kale ay la overwritten laga yaabo iyo dib u soo kabashada guul darreysan karaa.